होम क्वारेटाईनमा बस्दा : के खाँदा राम्रो ? - Rajdhani Daily News
Home प्रदेश प्रदेश ३ होम क्वारेटाईनमा बस्दा : के खाँदा राम्रो ?
पौष्टिक आहारसंगै जिवनशैली पनि महत्वपूर्ण
By डा.अरुणा उप्रेती
पौष्टिकयुक्त खाने कुराहरु खाएर कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) संक्रमण नहुने भन्ने होइन । रोगसंग लड्ने शक्ती कम, उमेर पुगेका, निमोनिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका मानिसहरुलाई कोरोना संक्रमण भयो भने जोखिम बढि रहन्छ ।
कोरोनाबाट संक्रमित मध्ये ८० प्रतिशत मानिसलाई साधारण खालको रुघाखोकिको लक्षण मात्रै देखिने गरेको पाइएको छ ।
कतिपयलाई थाह नहुन पनि सक्छ । दुइ चारदिन आराम गरेपछि ठिक हुन्छ । २० प्रतिशत मानिस निमोनिया भएका, मुटुको समस्या भएका, सुगर भएकालाई कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने बढि खतरा हुन्छ । रोग संग लड्ने क्षेमतालाई बृद्धि भने गर्नुपर्छ । तर,आज पौष्टिक कुरा खाएर भोलि रोग संग लड्ने क्षेमता बढ्ने भन्ने होइन । हामिले सदैव घरमा बनाएको कुराहरु खानुपर्छ ।
रोगसंग लड्ने शक्ति बढाउन पौष्टिक आहारसंगै जिवनशैली पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । घरमै बनाइएका खाने कुरा दाल,भात, तरकारी, दुध,दहि, मोहि खानुपर्छ । घरमा जे पाइन्छ त्यो कुरा खानु राम्रो मानिन्छ । जस्तैः तराईमा गहुँ र चामल पाइन्छ, मुस्ताङ, मनाङतिर कोदो, फापर पाइन्छ, त्यहि खानुपर्छ । घरमै बनेका स्थानिय परीकारहरु खाँदा शरिरपनि स्वस्थ र फूर्तिलो हुन्छ । जसले गर्दा पोषण तत्वहरु शरिरमा पुग्छ । यसले गर्दा रोगसंग लड्ने शक्ति बढ्छ ।
खाएर मात्रै हुँदैन, शारीरीक व्यायामहरु गर्नुपर्छ । खाएको कुरा पचाउन शरीरलाई चलायमान गराउन जरुरी छ । शरिरमा रोगसंग लड्ने शक्ति बढाउन हामिलाई प्रकृतिबाट पर्याप्त मात्रामा भिटामिन ‘डि’ जुन सिधै ८० देखि ९० प्रतिशत घामको किरणबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । घाममा बसेपछि कालो भइन्छ भन्ने सोंच हटाउन आवश्यक छ । हामिले पोषणबाट प्राप्त गर्ने क्याल्सीयम भिटामिन ‘डी’ को अभावले राम्रोसंग सोस्न सक्दैन । क्याल्सीयम राम्रो संग नसोस्दा हाड जोर्निहरु कमजोर हुँदै जान्छन् । अनि खानेकुराहरु राम्रोसंग नपच्न सक्छ ।
यो अवस्थामा तिन फीटको शारीरीक दुरी कायम गरेर बस्नुपर्छ । महामारीको बेला रमाइलो गरौं भन्ने होइन, सकेसम्म संगै हिँड्नु हुँदैन, जमघट भएरपनि नबसौं । खानेकुराहरु पर्याप्त मात्रामा खाने, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउने गर्नुपर्छ ।
(Visited 1,194 times,2visits today)